अफगानिस्तानमा पत्रकार कुट्दै तालिबान ! « MNTVONLINE.COM
अफगानिस्तानमा पत्रकार कुट्दै तालिबान !
एजेन्सी । अफगानिस्तानमा तालिबानले पत्रकारलाई कुटेका छन् । तालिबानको विरोधमा महिलाहरुले गरेको प्रदर्शनको भिडियो खिचेका स्थानीय पत्रकारलाई तालिबानले कुटपिट गरेको हो ।
काबुलको इटिलाट्रोज पत्रिकाका दुई पत्रकार टाकी डारयाबी र फोटो पत्रकार नेमातुल्लाह नाकबीलाई तालिबानले कुटपिट गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
महिलाहरुले गरेको प्रदर्शनको कभरेज गरिरहेका बेला उनीहरुलाई स्थानीय प्रहरी चौकीमा लगेर कुटिएको उनीहरुले बिबिसीलाई बताएका छन्। कुटपिट पछि बिना कुनै जानकारी उनीहरुलाई तालिबानले छोडिदिएको बताइएको छ ।
तालिबान लडाकुले महिलाको प्रदर्शनको तस्वीरलाई क्यामराबाट हटाईदिएको बताए । आफुहरुलाई किन पिटेको भनेर सोध्धा एक तालिबान लडाकुले तिमीहरु भाग्यमानी छौ की तिमीहरुको टाउको चुडाइएको छैन भन्ने जवाफ दिएको पीडित पत्रकारले बताएका छन् ।
पछिल्लो दुई दिनमा अफगानिस्तानमा १४ पत्रकारलाई हिरासतमा लिएर छोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकार संस्था द कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिष्टले जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशसम्बन्धी विवाद एक–दुई दिनमै हल हुन्छ: अध्यक्ष प्रचण्ड
चितवन । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग जोडिएको विवाद एक–दुई दिनभित्रै टुंगिने बताएका छन् । भरतपुर विमानस्थलमा मंगलबार पत्रकारसँग कुराकानी
नेपाल–भारत द्विपक्षीय परामर्श समूहको १४औँ बैठक बिहीबार बेंगलुरुमा
संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर मात्र म बाहिरिन्छुः प्रधानन्यायाधीस जबरा
शाही पदवी त्याग्दै जापानी राजकुमारी माकोले गरिन् प्रेमीसँग बिहे
सुडान सैन्य ‘कू’ विरुद्ध ब्यापक जनप्रदर्शनः ७ जनाको मृत्यु, १४० घाइते
सुडानमा सैनिक ‘कू’: प्रधानमन्त्री नजरबन्दमा, मन्त्रीहरु पक्राउ
कोलम्बियाले कुख्यात लागु औषध तस्कर ओटोनियललाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने